April 27 is the Voter Registration Deadline for the May 18, 2021 Special District Election - Somali | Multnomah County
April 27 is the Voter Registration Deadline for the May 18, 2021 Special District Election - Somali
Arbacada, Abril 21, 2021
Dorashooyinka Degmada Multnomah waxay xasuusinaysaa codbixiyayaasha in Salaasada, Abril 27 tahay kama danbeysta isdiwaangalinta codbixinta Doorashada Gaarka ah ee Maayo 18, 2021 ee Degmada.
Macluumaadkan waxaa lagu arki karaa Ingiriisi, Isbaanish, Jayniis, Fiitnaamiis, Ruush, iyo Soomaali.
Wakhtiga kama danbeysta Isdiwaangalinta Codbixiyaha Oregon waa Abril 27, 2021.
Wakhtiga kama danbeysta Isdiwaangalinta codbixiyaha cusub ee Oregon waa Salaasada, Abril 27. Maanta qorshee inaad codayso ama inaad eegto inaad diiwaan gashan tahay si aad uga codayso cinwaankaaga wakhtigan. Waxaad iska diwaangalin kartaa onlaayn: www.oregonvotes.gov/register. Si aad iskaga diwaangalisid codbixinta onlaaynka codbixiye ku haboon waa inuu haystaa liisanka dirawalnimada saxda ah ee Oregon, ogolaansho, ama Kaadhka Aqoonsiga. Wakhtiga kama danbeysta isdiiwaangalinta onlaaynku waa 11:59 p.m. Abril 27, 2021.
Hadii aanad haysan liisanka dirawalnimada saxda ah ee Oregon, ogolaansho, ama Aqoonsi, ama uu kaa dhacay waxaad u baahan doontaa inaad iska diwaangalisid warqada Kaadhka Diwanagalinta Codbixiyaha Oregon. Kaadhadhka diwaangalinta waxaa laga heli karaa xafiiska doorashooyinka, maktabada dadweynaha, ama laga daabacan karaa wabsaaydka. Wakhtiga kama danbeysta dirista Kaadhka Diwaangalinta Codbixiyha Oregon waa calaamada USPS Abril 27, 2021.
Codbixiyayaashu sidoo kale waxay isku diwaangalin karaan inay uga codeeyaan caadi Dhismaha Doorashooyinka Degmada Multinomah Duniway-Lovejoy ee 1040 SE Morrison Street in Portland. Doorashooyinka Degmada Multnomah waxa ay aqbali kartaa foomamka is duwaan gelinta ee cid kasta oo degan Oregon. Wakhtiga kama danbeysta diiwaangalinta codbixiyaha goobtu waa 5 p.m. Abril 27, 2021.
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay raacaysaa dhamaan talooyinka amaanka ee ay bixisay gobolka iyo Xarunta Kahortaga iyo Xakamaynta Xanuunku (Centers for Disease Control and Prevention,CDC) oo ay ku jiraan xidhashada waji gashadka iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Waji gashadka ayaa waajib ah marka la booqanayo labadeena goobood ee adeega codbixinta. Cod bixiyayaal badani waxay sidoo kale ku buuxin karaan khadka tooska ahaan. Wixii su'aalo ah, fadlan la hadal 503-988-8683.
Doorashooyinka dawlada hoose waa muhiim. Samayso qorshe si aad u CODAYSO Doorashooyinka bisha Maayo!
Doorashada xigta ee Degmada Multinomah waa Maayo 18, 2021 Degmada Gaarka ee Doorashada. Waxa ku jira tartamada boosaska golaha dugsiga deegaankaaga, koolejka bulshada, adeega waxbarashada degmada, qeybta dabka iyo biyaha degmada. Iyada oo ku xidhan goobta aad ku nooshahay, waxaad warqadaada codbixinta ka heli kartaa mid ama in ka badan oo kamid ah tartamadan. Waxaad sidoo kale heli doontaa ugu yaraan hal cabbir warqad codbixineed. Dhammaan codbixiyayaasha Degmada Multnomah waxay u heli doonaan waraaq codbixineed doorashadan. Waraaqaha codaynta waxaa la bilaabi doonaa in boosta lagu soo diro Abril 28.
Maadaama aan ku sii dhawnahay Doorashada Degmada Gaarka ah ee bisha Maajo 18, 2021, Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ka dalbaneysaa codbixiyeyaasha inay samaystaan qorshe si ay u CODEEYAAN Bishan Maayo!
Isdiiwaangeli Si AAD U CODEYSO.
Furo adeegga Lasoco Warqadaada Codaynta!
Adeegayaga caanka ah Lasoco Warqadaada Codaynta wuxuu hada diyaar ku yahay dhowr luuqadood! Waxaad dooran kartaa inaad ku heshid fariimaha lasocoshada warqada codbixinta iyo wararka Ingiriisi, isbaanish, Fiitnaamiis, ama Shiineys. Hel astaanta "Waan Codeeyay" ee onleenka ah ka dib markaad celiso warqadaada codaynta. Codbixiyeyaasha Degmada Multnomahn waxay ku furan karaan adeegan inay booqdaan multnomah.ballottrax.net. 30% codbixiyeyaasha diiwaangashan horey ayayba u furteen adeegan muhiimka ah!
Waxaad ku heli doontaa warqaddaada codbixinta boostada laga bilaabo Abril 28. Hadii aanad helin warqadaada codaynta Maayo 6, qaad talaabo adiga oo kala hadlaya Doorashooyinka Degmada Multnomah 503-988-8683 si aad u badalato warqadaada codaynta. Ka dib markaad codeysid, waxaad haystaa labo ikhtiyaar oo aad kusoo celin kartid warqadaada codbixinta.
Hore u codee oo soo celi warqadaada codaynta. Shaambad looma baahna! Ku hel warqadaada codbixinta iimaylka Salaasada, Maayo 11 (ka horeba hadaad kasoo diraysid meel ka baxsan gobolka) si loo hubiyo inuu xafiiskayagu helo wakhti hore. Calaamaduhu kama tirsana Oregon.
Waxa aad sidoo kale warqadaada codbixinta keeni kartaa oo aad ku ridi kartaa Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah. Waxaad keentaa warqadaada codaynta Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah ee 24 saacadood ama Sanduuqa Laybareeriga Degmada Multnomah ee 24 saacadood ah. Dhamaan Sanduuqyada Goobaha Codaynta Degmada Multnomah ee Rasmiga ah waxa ay ku jiraan multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-somali-0. Macno ma leh sidaad u dooratid inaad usoo celisid warqada codbixintada, waa in la helaa 8:00 PM Habeenka Doorashada, Maayo 18, 2021.
Buug-yaraha Cod-bixiyeyaasha ee loo diray dhammaan qoysaska deeggaanka - Abril 21, 2021
Wakhtiga kama danbaysta ah ee is diwaangalinta codbixintu waa - Abril 27, 2021
Waraaqaha codbixinta waxay bilaabayaan in boosta loogu diro codbixiyaasha - Abril 28, 2021
Furan Maayo 3 - 18, 2021.
Xarunta Codbixinta Degdeg ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah
The Oregon Voter Registration Deadline is April 27, 2021 for the Special District Election
Multnomah County Elections reminds voters that Tuesday, April 27 is the voter registration deadline for the May 18, 2021 Special District Election